Dhageyso: Dadkii Ka Danbeyay Rabshadihii Qaar Ayaa la Hayaa. – Gedo Times
Dhageyso: Dadkii Ka Danbeyay Rabshadihii Qaar Ayaa la Hayaa.
2nd February 2016 admin Wararka Maanta 0
Yuusuf Maxamed Waceys, Guddoomiyaha Gobolka Bari ayaa sheegay in Saxaafada ay u soo bandhigi doonaan goordhow Shaqsiyaad qeyb ka ahaan Banaanbaxyo rabashado wata oo Shalay ka dhacay Magaalada Boosaso ee Xarunta Gobolka Bari.
Isagoo sii hadlaya Guddoomiyaha Gobolka Bari waxuu xusay in Kooxo qaswadayaal ah ay soo abaabuleen rabshadihii ka dhacay Magaalada Boosaaso, waxuuna intaasi ku daray in ay jireen Dad horey tabasho kaga tarsanayay Maamulka Gobolka islamarkaana uu u gudbiyay Madaxweynaha Maamulka Puntland.
Dhinaca kale, Yuusuf Maxamed Waceys, Guddoomiyaha Gobolka Bari ayaa sheegay in ay ku raadjoogaan ugu yaraan 6 Ruux oo soo abaabulay Rabshidihii Shalay ka dhacay magaalada.
Hadalka Guddoomiyaha ayaa imaanaya Xili Shalay Banaanbaxyo rabshado watay ay ka dhaceen bartamaha Magaalada Boosaaso ee Xarunta Gobolka Bari halkaasi oo ay ku dhinteen ugu yaraan 2 Ruux, halka 5 kalena ay ku dhaawacmeen
Dhageyso: Putland oo in Ay Xalisaa Xiisada Bosaaso
Kenya: Waxaan Dilnay Al- shabab